‘म नेपालको सुशील कोइराला जस्तो बन्न चाहन्छु’ : पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान | सु-सुचित नेपालको चित्र
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले नेपालका दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरहाना गरेका छन् । खानले कोइरालाको जस्तो सादगी जीवन धेरै नेतामा नहुने भएकाले आफू उनको प्रशंसक भएको उल्लेख गर्दै अनुशरण गर्ने जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै खानले कोइरालाको सम्पत्ति विवरण र सम्मानित जीवन आफ्ना लागि प्रेरणको स्रोत भएकाले आफूपनि कोइरालाजस्तै बन्ने कोसिस गर्ने जनाएका छन् ।
कोइरालाको सम्पत्तिको नाममा तीन थान मोबाइल मात्र रहेको र भाईको घरमा बस्दै आएको मानिस मुलुकको राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्ने कुराको उदाहरण दिएर गएको कुराको स्मरण गरेका थिए । यस्तै, उनी उच्च नैतिकवान नेता भएकाले संसारका लागि प्रेरणाका साथै शिक्षाको स्रोत समेत भएको जनाए ।
खानले कोइरालाको अनुसरण गर्दै सरकारी निवास समेत छाडेर सामान्य घरमा बस्न थालेका छन् । यस्तै, सरकारी खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने भन्दै उनले सैन्य सुरक्षाका साथै दुई जना कामदार मात्र लगेका छन् । जवकी प्रधानमन्त्री निवासमा कामदार मात्रै ५२४ जना रहेको जनाइएको छ ।
६५ वर्षीय धानमन्त्री खान पाकिस्तानका पूर्वक्रिकेटर समेत हुन् । स्मरण रहोस पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरीफ आफ्नी छोरीसहित भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद सजाय भोगीरहेका छन् ।
आक्रोशलाई शक्तिमा बदल्न जरुरी छ
आफूमाथि लागेका विभिन्न आरोपहरुको सामना गर्दै यी कप्तानले सबै विकेट सम्हालेका छन् । आम नागरिकहरुको आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै पार्लियामेन्ट सरकारको आलोचना गर्ने कामको कारण इमरान खान सबैभन्दा ठूलो मतदाताको आशा र भरोसाको केन्द्र बने ।
बैठक कोठामा बसेर सिष्टमलाई मात्रै गाली गर्ने उच्च वर्ग र अस्तव्यस्त सरकारी प्रणालीबाट दिक्क भएका आम युवापुस्ताले लाइनमा लागेर आफ्नो अमूल्य मत हालिसकेका छन् ।
युवा वर्गले ‘नयाँ पाकिस्तान’को सपना बुनेका छन् । राजनेताहरुलाई गालीको निशाना बनाउने युवाहरुलाई मात्रै इमरान खानको कारणले केही आशा दिलाएको छ । उनीहरुले यी गतिशील कप्तानको इमानको लागि भोट दिएका छन् ।
एक करोड ६८ लाख भन्दा धेरै भोटमा युवापुस्ताको एक ठूलो संख्या रहेको छ । तथ्यांकहरुको अनुसार अघिल्लो चुनावको तुलनामा दुई करोड नयाँ भोटर यो चुनावको हिस्सा बनेको छ ।
निर्वाचनबाट इमरान खानले संसदीय लोकतन्त्रको भविष्यलाई सुरक्षित बनाइरहेका छन् भन्ने कुराको पूरा आशा गरिएको । तर, एक महत्वपूर्ण कुरा अब यी कप्तानलाई फेरि त्यो युवा टिमको नेतृत्व गर्नेछन् जो गाली गलौजमा विश्वासमा राख्छन् ।
उनले युवाहरुको आक्रोशको आगोलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ । युवाहरु मोबाईलफोन हातमा लिएर न्यायको खोजीमा आफ्नो वरीपरीका चोरहरुलाई पिछा गर्दै दौडिएका छन् ।
उनीहरु गल्ली र बजारहरुमा अभियुक्तलाई दोषी बनाएर पेश गरिरहेका छन् र फैसला धेरैको भीडमा सार्वजनिक गर्ने कोशिसमा छन् । अब, उनले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने आज उनकै समर्थन गर्ने यी युवाहरु भोलि उनको विरुद्धमा हुन सक्छन् ।
इमरानको लागि अर्थव्यवस्था ठीक गर्न सायद ठूलो मसला होइन । अझै पनि उनले अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउने र सिस्टमलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सक्छन् ।
तर ‘नयाँ पाकिस्तान’का नयाँ मतदाता जो इमरानको शक्ति हुन् उनीहरुलाई असल, शिष्ट र दक्ष नागरिक कसरी बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको छ । यस मुद्दाले नै ‘नयाँ पाकिस्तान’मा इमरानको सफलताको परीक्षण गर्ने छ ।
माकुने झस्किँदा केपी ओलीलाई खतरा !
जब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिको छोरालाई लाइन लागेर भेटे त्यसपछि…
विप्लवसँग वार्ता सम्भव छैन : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
कांग्रेसद्वारा बुद्धमूर्ति तोडफोड गर्नेलाई कारबाही माग
समाजवादी-राजपा एकताका लागि के करा मिलाउँदै छन् गुपचुप ?
सभापति देउवाद्वारा बाढी पीडितको उद्धार र राहतमा जुट्न आग्रह
अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन तम्घासमा सिसीटिभी क्यामेरा
जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गर्न...
लोकसेवा विज्ञापन समानुपातिक बनाउन माग गर्दै वीरगञ्जमा प्रदर्शन
लोकसेवा विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दैै वीरगञ्जमा...
निलम्बनमा परेका नेपाल प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी...
२०७६ साल साउन ०३ गते शुक्रबारको राशिफल
वि.सं.२०७६ साल साउन ०३ गते । शुक्रबार...
धनगढीको एक होटलमा बम विष्फोट, होटल मालिकसहित ५ जना घाइते
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित चटकपुरमा आज साँझ विष्फोटन...
केपी र माधवबीच तत्काल कुनै विशेष सहमति...
मोटरसाईकलको ठक्करबाट वडा अध्यक्षको मृत्यु
दुई मोटरसाईकल एकआपसमा ठोक्किदा बैतडीको सुर्नायाका गाउँपालिका...
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेता...
कैलालीमा बिस्फोट, पाँचजना गम्भीर घाईते
धनगढीमा बिस्फोट हुँदा पाँचजना गम्भीर घाईते भएका...
प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेडका पदाधिकारीहरुले गरे सपथ ग्रहण
प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लि.ले २०७६ आषाढ २९ गते...